Editor, Author at MinSayYar - Page 500 of 529
13th May 2020 Editor
YBS စီးသူများ Mask တပ်ဆင်ထားမှသာ ယာဉ်ပေါ်တက်ရောက် ခွင့်ပြုမည်
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမေ ၁၃ ရက်မှစ၍ နေအိမ်ပြင်ပသို့ သွားလာရာတွင် နှာခေါင်းစည်း MASK မတပ်ဆင်ပါက အရေးယူမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားရာ YBS စီးနင်းသူများကလည်း Mask တပ်ဆင်ထားမှသာ ယာဉ်ပေါ်တက်ရောက်စီးနင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ထံမှ ယနေ့မေ ၁၃ ရက်တွင် သိရသည်။ မြို့နယ်အဆင့် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်‌ပြန်သော (၁/၂၀၂၀)ကြေညာချက် အပိုဒ် ၃(က)အရ ယနေ့မှ စတင်၍ နေအိမ်မှပြင်ပသို့ ထွက်ခွာသွားလာတိုင်း Mask တပ်ဆင်ရန်ဟု ဖော်ပြထားပြီး အပိုဒ် ၅ အရ လိုက်နာခြင်းမရှိပါက ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ Covid- 19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် YBS စီးနင်းမည့် ခရီးသည်များအားလုံး MASK တပ်ဆင်ကြရန်နှင့် သတ်မှတ်အကွာအဝေးအတိုင်း […]
အင်ဒိုနီးရှား၌ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် ဆန်ထွက်သည့် အေတီအမ်စက်များထားရှိ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌လည်း နိုင်ငံသားသန်းပေါင်းများစွာသည် တစ်နေ့တာ ဝမ်းဝရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရရာ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည် အခြေခံလူတန်းစားများ အဆင်ပြေရေးအတွက် ဆန်ထွက်သည့် အေတီအမ်စက်များကို စတင်တပ်ဆင်ထားရှိပေးနေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်မက အရင်အပတ်မှာ ကုမ္ပဏီက အထုတ်ခံရတယ်၊ ကျွန်မခင်ပွန်းလည်း နစ်နာကြေးမရဘဲ အထုတ်ခံခဲ့ရတယ်၊ ဒီကထုတ်ပေးတဲ့ ဆန်ကအများကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဒီလောက်ရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ဟု ဒဲပေါ့ရှိ စစ်စခန်းတစ်ခုတွင် ဆန်လာထုတ်သည့် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် မိခင်လောင်း လင်ဒါ ဆယာဖရီက ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြို့တော် ဂျကာတာ၌ ဆန်ထုတ်ပေးသည့် အေတီအမ်စက် ၁၀ လုံးရှိနေပြီး COVID-19 ကြောင့် နာလန်မထူနိုင်အောင် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သူများအား ကူညီနိုင်ရန် အစိုးရက စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန်ထုတ်ပေးသည့် အေတီအမ်စက်များတွင် အစိုးရကထုတ်ပေးထားသည့် ကတ်ဖြင့် ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ခါထုတ်လျှင် […]
ဘိလပ်မြေကောင်းမကောင်း နှင့် အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း
ဘိလပ်မြေ အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း ၁။ ဘိလပ်မြေအမှုန့် အနည်းငယ်ကို ရေဖျော်ပြီး အလုံးကလေး(၂)လုံး၊ (၃)လုံးခန့်လုံးပြီး ခဏအခြောက်ခံထားပါ။ (၂)မိနစ်ခန့် ကြာသော် ထိုဘိလပ်မြေလုံးများအား လက်ဖြင့်ဖိခြင်း၊ ဖျစ်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ လုံး၀ ကွဲအက်မသွားဘဲ သံခဲ၊ ကျောက်ခဲကဲ့သို့ မာနေလျှင် ဘိလပ်မြေ စစ်သည်။ ကွဲအက်သွားပါက ဘိလပ်မြေ အတုဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ဘိလပ်မြေအမှုန့်အနည်းငယ်ပေါ်သို့ိ သံပရာရည်(သို့) ရှောက်ရည် အနည်းငယ် ညှစ်ကြည့်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ဘိလပ်မြေအစစ်ဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝဆူပွက်မလာပါက အတုဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ( အထက်ပါ နည်းများမှာ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အမှတ်(၁)၊ သရက်မြို့၊ အမျိုးအစား စစ်ဆေးရေး ဌာနမှ ဦးအေးကျော်၏ ပြောပြချက်ဖြစ်ပါသည်။) ခရစ်ဒစ် ####################### Unicode ဘိလပ်မြေ အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း ၁။ […]
ွှမနျမာ နဲ့ ဘငျ်ဂလားဒေ့ရျှအကွား အငျအားပွငျးမုနျတိုငျးတဈခု ဝငျရောကျ တိုကျခတျဖှယျရှိ
မွနျမာနဲ့ ဘငျ်ဂလားဒေ့ရျှအကွား အငျအားပွငျးမုနျတိုငျးတ ခု ဝငျရောကျ တိုကျခတျဖှယျ ရှိ ဒီသီတင်းပတ်နှောင်းပိုင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး လာမယ့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြား မိုးစတင် ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက် မိုးလေဝသဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ကြား နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း လေဖိအား နည်း ရပ်ဝန်းတခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အလားအလာတွေရှိနေတယ်လို့ ဒေသတွင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း သတိပေး အချက်ပြစင်တာ ညွှန်ကြား ရေးမှူး N Puviarasan ကThe New Indian Express သတင်းစာကို ပြောပါတယ။ ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ နီကိုဘာကျွန်းတဝိုက် မေလ ၁၆ ရက်ဝန်းကျင်မှာ အနောက်တောင်မုတ်သုံလေ […]
ဒေးဗစ်လား တည်းခိုနေသည့်ဟိုတယ်ကို လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထား
နာမည်ကျော်တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လား Quarantine ဝင်ရောက်နေသည့် ဟိုတယ်ကို လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားပြီး သတ်မှတ်ကာလပြည့်ပါက ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး COVID -19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောသည်။ ‘‘ကျွန်တော်တို့ အပြင်မှာပြောနေကြသလို ဟိုတယ်က ထွက်သွားတယ်ဆိုတာ သတင်းမှားပါခင်ဗျ။ လက်ရှိဟိုတယ်ကို လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားပါတယ်။သတ်မှတ်ကာလ ပြည့်သွားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဥပဒေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်’’ ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ထို့အပြင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကာလအတွင်း လူစုလူဝေး ပြုလုပ်မှု ကြောင့် တရားစွဲဆိုခံ ထားရသော ဒေးဗစ်လားသည် အသွားအလာ ကန့်သတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ City Hotel ၌ နေထိုင်လျက်ရှိရာ မေလ ၁၉ ရက်တွင်မှ […]
မေလ (၁၄) ရက်နေ့ တစ်မနက်လုံး ရန်ကုန်ရှိ မြို့နယ်အားလုံးနီးပါး မီးပျက်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များတွင်… (၆၆) ကေဗွီ ၊ (၃၃) ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံများ၊ Distribution Transformer များ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရေရှည်ဓာတ်အားတည်ငြိမ်ပြည့်ဝစွာ ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဟောင်းနွမ်း၍ ဝန်အားမနိုင်တော့သော (၁၁) ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများအား လျှပ်ကာပါသော ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးအသစ်များဖြင့် လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု လျော့နည်းကျဆင်းစေရေးအတွက် သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို မေလ ၁၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့ ) တွင် မနက် (၉) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂) နာရီအထိ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် အချိန်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဉက္ကလာပ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ တောင်ဉက္ကလာပ၊ ရန်ကင်း၊ ဒေါပုံ၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း၊ သာကေတ၊ […]
အပူလောင်၊ ဆီပူလောင်သူများ အမာရွတ် မကျန်အောင် ပျောက်တဲ့ ကွမ်းသီး အပူလောင် အမာရွတ် ပျောက်နည်း (တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလေးပါ) မီးလောင်၊ အပူလောင်၊ ဆီပူလောင်သူများအား ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါက ခရုသင်းကဲ့သို့ အဖြူကွက်နှင့် အပူလောင် အမာရွတ် ကျန်မနေရစ်ဘဲ နဂိုအသား အရေရောင်ကဲ့သို့ ပြန်လည် ဖြစ်စေရန် အတွက် အနာသက်သာ ပျောက်ကင်းစမှစ၍ ကွမ်းသီးအား ကျောက်ပျဉ်တွင် သွေး၍ ရရှိသော ကွမ်းသီး အရည် အား လူးပေးရန်သာ ဖြစ်သည် ။ နေ့စဉ် မကြာခဏ အနည်းဆုံး တစ်နေ့ (၃) ကြိမ်ထက်မနည်း လိမ်းပေးစေခြင်းဖြင့် မူလ အသားအ‌ရေ အရောင် ကဲ့သို့ပင် ပြန်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ ။ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးတစ်ခွက် မေတ္တာဖြင့် စိုင်းမင်းသန့် […]
ဧပြီလ မီတာခများနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
ဧပြီလ မီတာခများနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ တဲ့အခြေအနေများ နှင့် ဖြေရှင်းချက် များ ( အဲဒါကြောင့်မီတာများ ဖြစ်နေတာများလား ဧပြီလ မီတာခကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပီး ပြောစရာလေးရှိပါတယ်… ယူနစ် ၁၅၀ free unit နှုတ်ပီးတာတောင် အိမ်သုံးမီတာတွေက အရင်လတွေထက် ၂ ဆကျော်လောက်ကျသင့်နေကြပါတယ်… ကျနော့်သိသလောက် အချက် ၃ ချက်ပဲရှိပါတယ်…. ၁… Stay At Home နေ တာများတယ့်အတွက် အိမ်တွေအားလုံးလိုလိုဟာ လျှပ်စစ်နဲ့ပါတ်သတ်တယ့်အရာတွေကို ပိုသုံးဖြစ်ပါတယ်..ဥပမာ …အဲယားကွန်း ပန်ကာ မီးပူ လျှပ်စစ်မီးဖို ထမင်းပေါင်းအိုး တီဗီ အားသွင်းစေရတယ့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ….. ၂…ယခုလမီတာခငွေမှာ ဧပြီလအတွက်ဖြစ်ပါတယ်…နွေရာသီ အလွန်ပူတယ့်ရာသီဖြစ်ပီး စံချိန်တင် အပူချိန်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်..ဒီအချက်က Stay At Home မှာ လျှပ်စစ်ပိုသုံးဖို့ Boost ပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်… […]
ဆွမ်းကွမ်းခက်ခဲနေတဲ့ သီလရှင်တွေကို တစ်ပါး ၁၂ ပြည်နှုန်းလှူပေးခဲ့တဲ့ ရွှေဘိုမြို့ကဆန်လောကသားများ
ဒီတစ်ခါတော့ ရွှေဘိုမြို့က ဆန်လောကသားတွေရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးအကြောင်း တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးတွေ ကျနေသလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သာ့သနာ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ သံဃာနဲ့ သီလရှင်တွေကလည်း အလှူမခံဖြစ်တော့ ဆွမ်း ကွမ်းအတွက် အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ သီလရှင်တွေဆိုတာကလည်း သံဃာတွေလောက် လဘ်လာဘ ပွင့်လမ်းသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတေ်ာတော်များမျးာကလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲ လှူတာများပါတယ်။ အခုတော့ ဆွမ်းကွမ်းအတွက် သီလရှင်ဆရာမကြီးတွေကို ရွှေဘိုမြို့ ဆန်လောကသားတွေက တစ်ပါးကို ဆန် ၁၂ ပြည်နှုန်းထားနဲ့ လှူပေးခဲ့တာ သိရလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်။ဒီသတင်းကို ပရိသတ်တွေကိုလည်း မျှဝေပေးပါတယ်နော်။ သာဓု ခေါ်ပေးကြပါဦး။ ခရက္ဒစ္ ####################### ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန် ဒီတစ်ခါတော့ ရွှေဘိုမြို့က ဆန်လောကသားတွေရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးအကြောင်း တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးတွေ ကျနေသလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ […]
ခီမောငျနှံနှငျ့ စတေနာရှငျတှရေဲ့ ကူညီထောကျပံ့မှု၊ တကယျလိုအပျနသေူတှဆေီကို ရောကျပါပွီ
ခီ‌ေမာင်နှံနှင့် စေတနာရှင်တွေရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှု၊ တကယ် လိုအပ်နေသူတွေဆီကို ရောက်ပါပြီ ယနေ့ ပူးပေါင်းလှုဒါန်းမှု! FCPN program မှ Clean Yangon စီစဉ်ပြီး သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် ဒလမြို့နယ်နှင့် ရွာသာကြီးမြို့နယ်တို့တွင် ငွေသားအလှူငွေစုစုပေါင်းသိန်းငါးဆယ်(စာအိတ် ၅၀၀ အိတ်) အားသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ FCPN program အားပါဝင်လှူဒါန်းကြသူ အလှူရှင်များ နှင့် အများပြည်သူအားလုံး ကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း သာဓု သုံကြိမ်ခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။🙏🙏🙏 (Wave pay ဖြင့်တောင်းခံသူများအား စာရင်းသေချာပြုစုနေပါသဖြင့် လာမည့်အပတ်မှ ငွေစတင်လွှဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Message box ပြန်ဖွင့်ချိန်ကိုလည်း မကြာခင်ကြေညာပေးပါမယ်။) အကူအညီလိုအပ်နေသူတြေအတြက် ခီမောင်နွံရဲ့ စေတနာ….တကယ္ကို လေးစားစရာပါ Credit ################### ခီေ မာင်နှံနှ င့် စေတနာရှင်တွေ ရဲ့ ကူညီထော က်ပံ့မှု၊ တကယ် […]
Previous 1 … 499 500 501 … 529 Next